घरमा लक्ष्मीमाताको कृपा चाहनुहुन्छ ? लगातार ३ शुक्रबार अपनाउनुहोस् यी ३ उपाय - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»घरमा लक्ष्मीमाताको कृपा चाहनुहुन्छ ? लगातार ३ शुक्रबार अपनाउनुहोस् यी ३ उपाय
घरमा लक्ष्मीमाताको कृपा चाहनुहुन्छ ? लगातार ३ शुक्रबार अपनाउनुहोस् यी ३ उपाय
By मनिषा थापा on ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०६:१७ धर्म/दर्शन
पिएनपिखबर, भक्तपुर : ज्योतिषका अनुसार हरेक दिन अलग-अलग देवीदेवतासंग सम्बन्धित हुने गर्दछ। शुक्रबार देवी लक्ष्मीको बिशेष पुजा गर्ने गर्दछ। घरमा सुख-समृद्धि बनाईराख्न देवी लक्ष्मीका साथै भगवान बिष्णुको पनि पुजा गर्नु पर्दछ। लक्ष्मी मातालाई प्रसन्न पार्न शास्त्रमा अनेक उपाय बताइएको हुन्छ। लगातार ३ शुक्रबारसम्म यसो गर्नुहोस लक्ष्मी माता तपाईप्रति प्रसन्न हुनुहुनेछ।
लक्ष्मी माताको कृपा चाहनु हुन्छ भने देवीको मन्त्र जप गर्नुहोस। घरको पुजा कोठामा वा कुनै देवी लक्ष्मी माताको मन्दिरमा पुजा गर्ने गर्नुहोस। घ्युको दीपक जलाउनुहोस्। पुजापछि ऊँ श्रीं श्रीये नम: मंत्रको जप १ सय ८ पटक गर्ने गर्नुहोस। मन्त्र जपका लागि कमल गट्टेको माला प्रयोग गर्ने गर्नुहोस। यदि सक्नुहुन्छ भने शुक्रबार शुरुवात गरि हरेक दिन मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोस। सक्नु भएन भने कमसेकम ३ शुक्रबारसम्म अवश्य गर्ने गर्नुहोस।
देवी लक्ष्मीको पुजा र मन्त्र जपको साथै कन्याहरुलाई घरमा बोलाएर भोजन गर्ने गर्नुहोस। भोजनमा खीर दिन नभुल्नुहोस्। भोजन गरिसकेपछि सफा मनले दान गर्ने गर्नुहोस। यी उपाय ३ शुक्रबारसम्म अपनाउनुहोस् शुभ फल मिल्नेछ।
महालक्ष्मीको साथै भगवान बिष्णुको पनि पुजा गर्ने गर्नुहोस। पुजामा दक्षिणावर्ती शंख, पहेलो सिक्का, गोमती चक्र पनि राख्नुहोस। पुजा गरिसकेपछि यी चिजहरुलाई दराजमा राख्नुहोस्। यसो गर्दा तपाइको घरमा माता लक्ष्मीको कृपा सदैब रहनेछ।